FBC - Shaampiyoonaan Atileetiksii Ityoophiyaa 47ffaan Kibxata eegala
Shaampiyoonaan Atileetiksii Ityoophiyaa 47ffaan Kibxata eegala
Finfinnee Ebila 6,2010 (FBC) Guyyoota 6 walitti aanaaniif kan gaggeeffamu Shaampiyoonaan Atileetiksii Ityoophiyaa 47ffaan Kibxata istaadiyeemii Finfinneetti kan eegalu ta’uu Federeeshinii Atileetiksii Ityoophiyaa beeksiise.
Preezdaantiin Federeeshinichaa kumaalaa Hayilee G/Sillaasen,shaampiyoonaa kanaan atileetootni qabxii gaarii galmeessiisan Shaampiyoonaa Atileetiksii Afrikaa ji’a Adoolessa dhufu gaggeeffamu irratti Ityoophiyaa bakka bu’uun ni hirmaatu jedhaniiru.
Shaampiyoonaa kanarratti kilaboonni 40 fi dhaabbileen akkasumas naannooleen hundii bulchiinsi magaalaa lamaan irraa dubartoota 500 fi dhiirri 737 walumaagalatti atileetootni kumni 1 fi 237 ni hirmaatu.
Dorgommicha irratti Muktaar Idiriis, Salamoon Bargaa, Mohaammada Amaan fi Ruut Agaa dabalatee atileetootni bebbeekkamoon baay’een kan hirmaatan ta’uu federeeshinichi beeksiise.
Atileetoota moo’ataniif badhaasni birrii fi meedaaliyaa kan kennamuu fi riikardii warreen cabsaniif badhaasni Birrii dabalataan ni kennama jedhameera.
Qabxiin dorgomtootni shaampiyoonaa kana irratti galmeessisan Waldaa Atileetiksii Fedeereeshinii Adunyaan beekkamtii ni argata jedhaniiru.
Shaampiyoonichi dorgommii waggaa Federeeshiniin Atileetiksii Ityoophiyaa qopheessu keessaa isa duraati.
Oduuwwan Biroo « Taphataa beekkamaan adunyaa Roonaaldinoo Goocho Finfinnee gale	Ronaaldinihoo Guchoo turtii Finfinnee keessaa xumure »